Ku hel GEMS -ka Infinity ee Burburka Castle: suurtagal ma tahay? | Madasha Mobile -ka
Ka hel GEMS -ka Infinity ee Burburka Castle: suurtagal ma tahay?
Haddii aad tahay mid ka mid ah ciyaartoy badan oo adduunka oo dhan soo jiitay Burburka qalcadda, qoraalkan adiga ayaa ku daneynaya. Waxaa hubaal ah inaad si fiican u taqaan waxa ciyaartu ku saabsan tahay iyo waxa wanaaggeeda waaweyn ay yihiin. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa ogaato khiyaanada qariibka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ciyaartoy badani raadinayeen waa inay ogaadaan sida loo sameeyo Hel dhagaxyo aan dhammaad lahayn Castle Crush.
Laakiin ka hor intaanan wax ka qaban su'aashan, aan dib u eegno qaar ka mid ah xaqiiqooyinka aasaasiga ah ee ku saabsan ciyaartan istiraatiijiyadeed ee aadka u weyn. Burburka Castle waa ciyaarta RPG ee caadiga ah (Duubista Ciyaarta, ama ciyaar door-ku-ciyaaris oo Isbaanish ah), oo la sii daayay 2006 Ciyaaraha Madadaalada Ah Bilaash. Laga soo bilaabo markaa ilaa maanta, waxay soo martay hagaajin iyo cusboonaysiin tiro badan.
Waa mid ka mid ah cayaaraha istiraatiijiyadeed ee waqtiga-dhabta ah, kaas oo ciyaaryahanka lagu qasbay inuu noqdo mid sax ah oo dhakhso badan. Waxaa jira Ficil badan, oo leh dagaal toos ah oo aad u badan (ku dhawaad ​​jahwareer) kuwa ka dhiga adrenaline -ka inuu kor u kaco. Iska ilow ciyaarahaas gaabiska iyo caajiska leh ee aakhirka ka dhigaya kuwa ciyaara inay quustaan. Burburka Castle waa wax kale.
1 Burburi qalcadda cadowga
2 Muhiimadda gemooyinka
3 Sida loo helo Qulqulka Infinity Castle Crush
3.1 Soo iibso dhagaxyo
3.2 (Sharci) xeelado lagu helo dahabka
Burburi qalcadda cadowga
Burburi. Ereygan Ingiriisiga ah siyaabo badan ayaa loo turjumi karaa: burburin, burburin, tuujin, tuujin, talaabo qaado, burburin ... Si kooban, u burburi. Taasi waa si sax ah hadafkayaga ciyaarta: burburi qalcadda cadowgeenna.
Hel dhagaxyo aan dhammaad lahayn Castle Crush.
Si loo gaaro hadafkan, ciyaartoygu wuxuu adeegsan karaa dhammaan noocyada kheyraadka. Waxaa jira a liistada ballaaran ee ciidamada la heli karo, in kasta oo dhammaantood leeyihiin astaamo u gaar ah iyo astaamo u gaar ah. Waa istaraatijiyaha (yacni, ciyaaryahanka) waa inuu go'aansadaa sida ugu wanaagsan ee loo adeegsan karo si uu ugu hoggaamiyo guusha.
Laakiin ka taxaddar, ma aha oo kaliya weerar. Cadowgu wuxuu kaloo isku dayi doonaa inuu qalcaddeenna ku burburiyo si walba. Sidaa darteed, waa inaanan waligeen dayacin difaaca.
Goobta dagaalka ee Castle Crush waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo qaab haad ah leh. Ciyaaryahanka waa inuu geeyaa ciidamadiisa (oo uu matalayo kaar). Kaar kastaa wuxuu leeyahay qiimo gaar ah dhibcood mana, halka cutub kastaa leeyahay mid u gaar ah qodobbada nolosha iyo a nooca weerarka ka duwan midka ay tahay inaad isku daydo inaad sida ugu fiican uga faa’idaysato.
Dagaal kasta ka dib waxaan fursad u heli doonnaa inaan furno laabta khaldan. Waxa aan ka helno waxaan ku hagaajin karnaa oo aan shaqsiyeyn karnaa martigaliyaasheena. Haddii aan helno kor u qaad qayb la siiyay, waxay sidoo kale kordhin doontaa dhibcaha ay garaacday iyo awooddeeda dagaal. Tani waxay kordhin doontaa fursadahayaga guusha. Maxaa kale oo laga dhihi karaa ciyaartan? Sawirradiisa ayaa ah mid faahfaahsan, si dhib yar ayay ugu isticmaashaa awoodda batteriga taleefannadeenna, umana baahnid xiriir internet oo aad u xoog badan si aad si habsami leh ugu socoto.
Waxay u egtahay mid sax ah? Haddii aad ku dhiirratid inaad ku noolaato tacaburkan, aad bay u sahlan tahay. Burburka qalcadda gabi ahaanba waa lagala soo bixi karaa dukaanka Google Play, kiniiniga iyo mobile -ka labadaba.
Sidoo kale waa in lagu daraa in Castle Crush uu yahay ciyaar kaliya lagula taliyay dadka isticmaala ee ka weyn 12 sano. Waxaa lagu turjumay in ka badan 40 luqadood wuxuuna diiwaangeliyaa boqolaal kun oo la soo dejisto.
Dib -u -eegid kooban oo ku saabsan aasaaska ciyaarta, waxaan diiradda saari doonnaa mowduuca aan halkaan u nimid: Castle Crush Gems oo aan xad lahayn iyo suurtagalnimada dhabta ah ee helitaankooda. Waana taas jawharaddu waa shidaalka dhabta ah ee ciyaarta istaraatiijiyadan. Waxay noo oggolaadaan inaan helno cutubyo cusub oo aan hore u marno. Waxay yihiin qayb lagama maarmaan u ah ciyaarta.
Sida kaliya ee lagu hormarin karo Burburka Castle oo lagu helo guulo badan ayaa ah in la goosto dahabka ugu badan ee suurtogalka ah.
Markaynu ciyaareyno oo aan horumar ka sameyneyno heerarka kala duwan, waan urursannaa qadaadiicda dahabiga ah. Iyaga ayaan ku iibsan karnaa cutubyo iyo xirfado cusub, furayaasha jilayaasha iyo, ugu dambayntii, hagaajin karna awoodeena dagaal. Laakiin sida ciyaaro kale oo badan oo qaabkan ah, qadaadiicda dahabka ah inta badan kuma filna. Uma adeegsan karno si aan u helno cutubyo gaar ah ama faa'iidooyin laga heli karo oo keliya iyadoo la adeegsanayo dhagaxyo.
Markaan fursad u helno inaan furno mid kasta oo ka mid ah sanduuqyada khasnadda ah ee aan hore u soo sheegnay, waxaan arki doonnaa in badan oo ka mid ah ay ku jiraan dhagaxyo. Lacagta "premium" ee ciyaarta. Hayso furitaanka laabta waxaadna yeelan doontaa dhagaxyo aan la koobi karin oo ah Castle Crush (waxaan jeclaan lahaa inay u fududaato sida la sheegay). Iyaga oo keliya ayaad ka heli kartaa kaararka ugu fiican ciyaarta. Halkan waxaa ah liistada wax walba oo ay noo oggolaadaan inaan sameyno (kuwa ciyaaray durba way og yihiin waxaan ka hadlayno):
Soo iibso walxaha qurxinta ee qalcaddeena.
Si dhakhso ah u dhammaystir hawlgalka Guddiga Baadhitaanka.
Iibso gaashaammo difaac ah (10-saac gaashaan alwaax ah = 300 dhagax, 24-saac gaashaan bir ah = 600 qumman; 72-saac gaashaan dahab ah = 1.500 dhagax).
Iibso ilaa 1.000 calaamadood oo sharaf ah 50 dahab (hawlgalkan waxaa la oggol yahay kaliya hal mar maalintii).
Sidoo kale ka iibso boosaska Warehouse iyo Heroes Altar.
Dukaanka ka iibso dahab ama mana.
Hel ilaa 5 isku day xabsi oo dheeraad ah.
Shaqaaleysii dhiseyaal badan si kor loogu qaado dhismayaal badan isku mar.
Abuur hibo geesiyaal cusub si aad u beddesho tii hore (300 oo dhagax).
Tirtir waqtiyada sugitaanka ee hababka hal -abuurka ee xerada militariga.
Higaada iyo casriyeynta cutubku si otomaatig ah ayey u dhammaadaan.
Abuur geesiyaal heer sare ah oo aan kala sooc lahayn.
Si dhakhso leh ayuu dib ugu soo nooleeyaa geesiyaasha dagaalka kadib (qiimaha: 10 dhagax)
Si toos ah u jooji habka hagaajinta dhismaha.
Si toos ah u jooji hanaanka dhismaha dhismaha.
Si loo xisaabiyo qiimaha ku jira dahabka si kor loogu qaado isla markiiba, qiyaasta soo socota ayaa loo qaadan karaa tixraac: Qiimaha aasaasiga ah ee 5 dahabka saacaddiiba (ama 120 dahab ah maalintii) oo lagu daray kharash dheeraad ah oo gaaraya ilaa 250 dhagax.
Laakiin jawharaddu waa qiimo sida ay dhif u yihiin. Waa inaad si fiican u isticmaashaa, oo leh dareen iyo miyir -qab. Waa inaan u isticmaalnaa si aan u awoodno inaan helno xeelado badan iyo kaararka noocyadiisa kala duwan. Waa inaan la khasaarin!
Sida loo helo Qulqulka Infinity Castle Crush
Waxaa jira ciyaartooy badan oo inta badan ku jahwareersan dhibka ay ku helayaan qadaadiicda iyo dahabka iyo gaar ahaan dahabka. Waxaan ka helnaa laabta, waa run, laakiin maaha tirada aan rabno. Hal -abuurayaasha Castle Crush ayaa laga yaabaa inay habkan u diyaariyeen inay "ku dhiirrigeliyaan" ciyaartoydu inay lacag ku bixiyaan ku iibso dhagaxyada ay u baahan yihiin lacag dhab ah.
Soo iibso dhagaxyo
Si dhakhso ah (in kasta oo aan raqiis ahayn) si aad uga hesho dahabka Castle Crush waa inaad iibsato
Tani waa fursad lagu helo Castle Crush dhagaxyo aan dhammaad lahayn, laakiin isla markaa waa a kharash in qof walba uusan diyaar u ahayn inuu qaato. Sidoo kale, waa maxay xiisaha leh in lagu gaaro ujeeddooyinka ciyaarta si fudud iyadoo la bixinayo? Waxaan ku talin lahayn kheyraadkan xaalado gaar ah oo gaar ah.
Tusaale ahaan, haddii aan isku aragno inaan ku dhegannahay heer oo aysan jirin si aan hore ugu soconno. Waxaan isku daynay wax walba annaga oo aan guulaysan. Markaa xoogaa riixitaan ah (xoqidda jeebabkayada) ayaa ku caawin karta. Xusuusnow inay qiimayn doonto oo keliya haddii taas beddelkeeda aan helno saacado badan oo madadaalo ah. Oo kaliya haddii aan yeelno adeegsiga kheyraadkan si aad u habboon.
Sidee loo sameeyaa? Dahabka waxaa lagu iibsan karaa adigoo gujinaya badhanka "Iibso", kaas oo lagu soo bandhigo agagaarka tirada dahabka iibka, oo ku yaal geeska midig ee sare ee shaashadda. Dahabka ayaa sidoo kale lagu iibsan karaa adoo furaya dukaanka ciyaarta dhexdiisa oo gujinaya "Qasnadda". Qaddarka dahabka ah ee aan sidan ku heli karno waxay ku xiran tahay haddii aan ku iibsanno doolar ama euro. Mararka qaarkood waxaa jira ofertas kaas oo ciyaartoygu helo qaddar dheeraad ah oo qaali ah ka dib markii uu iibsaday kowaad.
Waxa aan sinaba ugu waanin karin waa adeegsiga hacks ama khiyaamo sharci darro ah si aad u hesho dhagaxyo aan dhammaad lahayn Castle Crush. Kani waa dabin sidoo kale, wixii aan hore uga faalloonnay, ka xayuubiyay ciyaarta dhammaan nimcadiisa iyo macnaheeda.
(Sharci) xeelado lagu helo dahabka
Castle Crush dhagaxyo aan dhammaad lahayn?
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira habab dhammaystiran oo ansax ah oo sharci ah si aad uga hesho dahabka dheeraadka ah ee Castle Crush oo aad ku hormariso ciyaarta adigoon khiyaameyn oo aadan lacag ku bixin. Maaha xeelado sixir ah oo na siin doona dahabka aan dhammaadka lahayn ee istaroogga, laakiin waxay noqon doonaan caawimaad weyn. Halkaa tag consejos:
Isku day inaad ka qaybgasho qaar ka mid ah dhacdooyinka ay madashu abaabusho waqti ka waqti. Ciyaaraha IGG, si fiican u yaqaan dadka isticmaala ciyaarta taleefanka gacanta. Kaliya ka -qaybgalka waxaan heli doonnaa qaddar yar oo qaali ah, annaga oo aan wax kale samayn.
Ku qiimee ciyaarta 5 xiddigood Suuqa Apps. Abaalmarinta tan ma aha wax ka yar 100 dhagax.
Ku martiqaad saaxiib si aad u ciyaarto Castle Clash Iyada oo loo marayo Facebook, Twitter, Google ... Ama si fudud SMS. Tan waxaad ku kasban doontaa 200 oo dhagax.
Daawo fiidiyaha xayeysiiska ee ciyaartu bixisay. Daawasho kasta, oo inta badan qaadata qiyaastii hal daqiiqo ama ka yar, waxaa lagu abaalmariyaa muraayad.
Saxiix Tapjoy. Codsigan wuxuu heli doonaa dhagaxyo lacag la'aan ah beddelkiisa si loo soo dejiyo codsiyo kale ama looga ciyaaro ciyaaro kale oo webka codsiyada kala duwan ee la xiriira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Android » Ka hel GEMS -ka Infinity ee Burburka Castle: suurtagal ma tahay?
Layliyo si fiican loogu qoro kombiyuutarka
Facetime ma lagu isticmaali karaa daaqadaha? 5 Beddelaad Bilaash ah